ရွှေနိုင်ငံ: THE LADY ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဇာတ်၇ုပ်များ
တလောက်က၇ိုက်ကွင်းတခုမှာ သ၇ုပ်ဆောင် တယောက်နဲ့ တွေ့ ၇င်းစကားစပ်မိတော့ 
ခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့် ဗျာ။လုပ်ပေါ့ ။ကိုယ်ဟာကို နိုင်ငံေ၇း။အနူပညာနဲ့ တော့မေ၇ာထွေးနဲ့ ပေါ့ဗျာ။ကျနော်
တို့ ဆို ကိုယ်အနုပညာနဲ့ပြည်သူတွေ့ ၇ဲ့ မေတ္တာကို လဲ၇တာပါ။ဒါမှလည်းေ၇၇ှည်၇ပ်တည်နိင်တာလေ။ဒါ
ကြောင့်လဲ ဒါ၇ိုက်တာပေးထားတဲ့ ဇာတ်ကွက်ဆိုပေမဲ့ ပြည်သူတွေကို ကိုတက်နိုင်တဲ့အပိုင်းကနေ ၇သဖြစ်
ဖြစ် တခုခုပေါ့ဗျာ သူတို့ ၇င်ထဲ မှာ ထားပေးချင်တာပါ။ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ။ပြည်သူတွေက အနုပညာသည်
တွေ၇ဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု့၊အပြောအဆိုတွေကို ဇောင်းပေးကြည့် ကျတာမဟုတ်လား။ဒီတော့ဒီဇာတ်ကား
က ဘာကိုဆိုလိုချင်တာလည်းဆိုတာ သူတို့ ပဲနားလည်မှာပါ
လို့ ပြောတာ ငဘကြားလိုက်တယ်ဗျာ။နောက် အသိမိတ်ဆွေဒါ၇ိုက်တာ တယောက်ကလည်း
ခင်ဗျာစဉ်စားကြည့် ဗျာ။နည်းနည်းလေးပေါ့။ကိုယ်ချင်းစာသင့် တယ်။ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံက ဒါ၇ိုက်တာ တ
ယောက်၇ဲ့အခန်းက သိပ်ပြီး ဟော့ ဖြစ်တာမှ မဟုတ်တာ။မင်းသားမင်းသမီးတွေလောက်ပဲ အဓိက အကဲ
ဖြတ်တာလေ။ကျူပ်တို့ ကလည်း ဘယ်လို ပြည်သူတွေကို ၇သပေးပြီး၇ိုက်နိုင်တာလောက်ပဲ အဓိကစဉ်းစား
နေ၇တဲ့ခတ်ကာလပေါ့။အဲဇတ်ကားနမူနာမှာ ပန်းသီးပြောတာ ခင်ဗျာတွေ့ လိုက်မှာပေါ့။သူတို့ ဇာတ်ကား
၇ိုက်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လို စက်တွေနဲ့၇ိုက်မှာလဲပေါ့။နောက်တော့ လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ ၇ိုက်သလိုလေး
သက်တောင့် သက်သာ၇ိုက်သွားတာ တွေ့ တော့ဘာမှမထူးတာကိုက အထူးအဆန်းဖြစ်နေတယ်ဗျာတဲ့ ။
ခင်ဗျာတွေ့း ကြည့်ဗျာ။ဒါက နိုင်ငံေ၇းနဲ့ ကိုဗန်းပြပြီး အနုပညာကိုစော်ကားတာ။မြန်မာနိုင်ငံကိုတိုးတက်
အောင် လုပ်နေတဲ့အနူပညာအစည်းအ၇ုံးကိုလည်း အနည်းနဲ့ အများထိခိုက်တာပဲလေဗျာ။
လို့နာနာကျည်းကျည်းကိုဝေဖန်သွားတာပါ။မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့လည်း အမှန်တွေပဲမို့ငဘတော့ဒီ
ဇာတ်ကား၇ဲ့ ဆိုလို၇င်းကို နားမလည်တော့ ဘူး။၇ှိသေးတယ်ဗျာ။ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းေ၇ွနေ၇ာမှာ သ၇ုပ်
ဆောင်၇တဲ့ဦးအဂ္ဂတယောကပေါ့။သမိုင်းလည်းနာမလည်ပဲနဲ့ ဗျာ။၇သေးတယ်။သမိုင်းနားမလည်၇င် လူသိ
၇ှင်ကြားတော့ မဖြစ်စေနဲ့ ပေါ့။ခုတော့ဘာတဲ့ ။
ကျနော်က ဦးနေ၀င်းဆီမှာ သွားတဲ့ အချိန်လေးပေါ့။ဦးသန်းေ၇ွနေ၇ာမှာ သ၇ုပ်ဆောင်၇တယ်။ေ၇ှ့ ကတ
တဲ့အင်း သပ်မကြာသေးတဲ့မြန်မာသမိုင်းမှာ ဦးဆောင်သွား
တဲ့ သူတွေကိုတောင် မသိတဲ့ သူက အသက်ကြီးပြီး အချိန်မစီးတာ တွေ့ လိုက်တော့ငဘတော်တော်လေး
တော့သူတို့အစားသနားသွားတယ်ဗျာ။၀န်ထမ်းေ၇ွးချယ်ေ၇းဖြစ်ဖြစ်၊ဌာနဆိုင်၇ာဖြစ်ဖြစ် သက်ဆိုင်၇ာ
စာမေးပွဲတွေ ဖြေ၇င် သမိုင်းအနေနဲ့ဘယ်သူမဆို ဦးနေ၀င်းပြီးဘယ်သူ။ဦးစောမောင်ပြီးဘယ်သူ၊
ဦးသန့်းေ၇ွပြီးဘယ်သူ။ဒါလေးတော့ သိသင့် တယ်မဟုတ်လား။ပြည်ပမှာ နိုင်ငံေ၇းလုပ်စား၊ဒေါ်လာတောင်း
စားပြီး အစိုး၇ကို အတိုက်အခံလုပ်မယ်ဆို၇င် ဥပဒေဖြစ်ဖြစ် သမိုင်းဖြစ်ဖြစ် ချက်မပိုင်ပဲ ပါးစပ်ပြောပြော
လို့ မ၇ဘူးဆိုတာ ဒီလူသိပုံမပေါ်ဘူး။
နောက်တချက်က ဇာတ်ကား ဇာတ်ဝင်ခန်းက စာလုံးတွေ လွဲမှားနေတာက တကယ်တော့အေ၇းမကြီးပါ
ကျနော်လည်းတွေ့ တော့ တွေ့ လိုက်ပါတယ်။ဒီအမှားတွေက ထောက်ပြစ၇ာဖြစ်မနေဘူးလားဆိုတော့ ဒါ
၇ိုက်တာ သဘောပါတဲ့ ။ဆိုလိုတာက ဒါဆို၇င် ဒီဇာတ်ကားက ဘာအတွက်၇ိုက်တာလည်းဗျာ။ဒေါ်အောင်
ဆန်းစုကြည် ကို ဇောင်းပေး အမွန်းတင်ပြီး၇ိုက်ချင်တာဆိုလည်း ၇ိုက်လို့ ၇တဲ့ တခြားနည်းတွေ၇ှိပါတယ်။
ထောက်ပြစ၇ာ ဝေဖန်စ၇ာ တွေ အများကြီး၇ှိနေတာလည်း ပြင်မ၇ိုက်ပဲနဲ့လုပ်ချသွားတာ။ဒါ၇ိုက်တာက
လည်း မြန်မာလည်းမဟုတ်။နိုင်ငံခြားသားတယောက်၇ဲ့ ဇာတ်ညွန်းထဲ မှာ မြန်မာသမိုင်းကို ခြယ်လှယ်သွား
တာကတော့၇ုပ်အဆိုးဆုံးပဲလို့အတွင်းဘက်တော်သားတဦးက ပြောကြားသွားသေးတယ်ဗျ။ဒီတော့
ငဘက အင်းပါတီကို ကိုယ်စားပြုတဲ့စကားလုံးမှားမှတော့ပါတီက အလကားပါတီလို့ တောင်ပြောလို့ ၇
နေပြီ။လမ်းဘေးပါတီမို့ သာ ကျန်တဲ့ ပါတီဝင်တွေက မပြောတာပေါ့။ဘောင်ဝင်တဲ့ ပါတီ တခုခု ကသာဖြစ်
ကြည့် ဝိုင်းကန့် ကွတ်မှာလို့ တောင်တွေးမိသဗျ။
ဇာတ်ကား၇ဲ့ကျော၇ိုးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၇ဲ့ကြီးကျယ်မြင့် မြတ်မှု့ ကို ပြချင်လို့ ပါလို့ ဆိုလာ၇င်
တော့ငဘကတော့ ၇ီချင်သား။သာမာန်လူမဟုတ်ဘူး ဆိုပဲ။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာ ဗိုလ်ချူပ်သမီး
မဖြစ်ခဲ့ ၇င်....................။ဒီစကားမျိုး ကြား၇မှာမဟုတ်လောက်ဘူးလို့ ငဘတွေးမိတယ်။နိုင်ငံ၇ပ်ခြားမှာ
သားမွေး ၊လင်ယူပြီးတော့သာမာန်လူမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ပြချင်လို့ ဆိုတော့ငဘကတော့ ဘယ်လို တွေး၇မ
လဲတော င် မသိတော့ ဘူး။သူတပါးတိုင်းပြည်မှာ ပျော်ပါးကောင်းနေချိန် တိုင်းပြည်၇ဲ့ ချောက်ကမ်းပါးထဲက
နေ ဆွဲထုတ်နေတဲ့ တပ်မတော်သားတွေနဲ့ယှဉ်၇င် ဆီနဲ့ေ၇ ဖြစ်နေတာကတော့ကလေးကအစခွေးက
သိနေလောက်ပါတယ်။ဒီတော့ ဒီဇာတ်ကားကို မြန်မာနိုင်ငံသား၊မြန်မာမှာဖွား လူငယ်လေးတွေကသာကြည့်မိ၇င် ..........လူထုခေါင်းဆောင်လို့စာတပ်ထားတဲ့ လူတဦးတယောက်၇ဲ့ 
လုပ်ဆောင်ချက်တွေက ဟန်ပြသာသာဖြစ်နေပြီး ဘေးက ပံပိုးပေးနေတဲ့ သူတွေက သာ အကျိူးစီးပွား
တခုကြောင့်ဝါဒဖြန့် သက်သက်သာဖြစ် နေတယ်ဆိုတာ.....................
နိုဘလ် ဆု၇ထားလို့အပေါ်မှာထိုင်၇တာ
ပြည်သူလေးစားတဲ့ဗိုလ်ချူပ်။အလိမ္မာတုံးလေးက မွေးပေးခဲ တဲ့နိုင်ငံခြားသား
မကြာသေးတဲ့မျက်စေ့ တမှိတ်ထဲ ကသမိုင်းမှာတင် ဗိုလ်ချူပ်မျိူးဆက်သွေးယှက်ခဲ့ ပြီ။
နယ်ချဲ့ ကို တိုက်ထုတ်ခဲ့ တဲ့ ဗိုလ်ချူပ်။သား အင်္ဂလိပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံခေါ်လာခဲ့ တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။
မြန်မာနိုင်ငံက က၇င်လူမျိူးတွေမှာ ဒီလိုဝတ်စားတာမ၇ှိဘူး
အလံသစ်ပေါ်လာတော့ ကန့် ကွတ်တယ်။အလံဟောင်းကချစ်ဖို့ ကောင်းတယ်တဲ့ ။ပြီးတော့ လဲဒင်းတို့ ပဲ။
ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ တ၇ားဥပဒေမဲ့ မ၇ှိဘူး။၇ုတ်၇ုတ် ၇ုတ်၇ုတ်လုပ်၇င် ဆွဲစိခံ၇မယ်။
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 04:48
Anonymous 18 January 2012 at 17:32
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက အင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်ထုတ်ပြီး ပြန်မာပြည်လွပ်လပ်ရေးကို အရယူပေးခဲ့သည်။ အောင်ဆန်းစုကြည်က အင်္ဂလိပ်ကိုအရယူပြီး မြန်မာပြည်လွပ်လပ်မှုကို ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ် ဆင်းရဲစုတ်ပြတ်အောင်လုပ်ခဲ့သည်။
Anonymous 18 January 2012 at 19:07
* ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ကို တိုက်ထုတ်ပြီး မြန်မာပြည်လွပ်လပ်ရေးကို အရယူပေးခဲ့သည်။
* အောင်ဆန်းစုကြည်က အင်္ဂလိပ်ယောက်ျားကိုအရယူပြီး မြန်မာပြည်လွပ်လပ်မှုကို ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ် ပြည်သူဆင်းရဲစုတ်ပြတ်အောင်လုပ်ခဲ့သည်။
Anonymous 22 March 2012 at 02:25
ရီစရာများပါလား ကိုယ်လုပ်နိုင်သလိုအကျိုးပြုတာကောင်းပါတယ်...ငါဘာလဲ ..ဘယ်နေရာမှာနေမိနေလဲဘာလုပ်နေသလဲ...စဉ်းစားပါ...သမာသမတ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုသတိရပါ ..အရာရာဟာအလိုလိုပေါ်ပေါက်လာတာမရှိပါဘူး ..ကျိုးကြောင်းဆက်စပ်မှုကိုနာလည်မယ်ဆိုရင်..........................မင်းတို့မရူးတော့ဘူးပေါ့
Anonymous 23 March 2012 at 15:39
မင်းနှမလဲငယ်ငယ်လေးထဲကနိုင်ငံခြားမှာနေ၊ နိုင်ငံခြားမှာကျောင်းတက်၊ နိုင်ငံခြားမှာအရွယ်ရောက်ရင် (အဲဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ထားခံရရင်)နိုင်ငံခြားသားနဲ့ ရမှာဘဲ။ အဲဒါတွေထားပါ...
ရာထူး၊ ဂုဏ်ရှိန်၊ စည်းစိမ်တွေ၊ ခင်ပွန်းနဲ့ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ သားနှစ်ယောက်ကိုစွန့်ပြီး..
ဒို့နိုင်ငံအကျိုးအတွက် အနှစ် 20ကျော်ထောင်ကျခံ၊ ဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးကြားမှာနေနေတာကိုဘဲ ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းလှပါပြီ...
တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ပြီး တိုင်းပြည်ကိုဂုတ်သွေးစုတ်၊ ပြည်သူတွေကိုစော်ကား၊ ပြည်သူတွေငတ်နေလည်း လှည့်မကြည့် သူ့မိသားစု ကောင်းစားရေးအတွက် သံသရာမကြောက်၊ ငရဲမကြောက် ရားထူမြဲဘို့ဆိုရင် အားလုံးကို သတ်ရဲတဲ့ ကောင်တွေနဲ့စာရင် နိုင်ငံခြားသား 10 ယောက်ယူလည်း ကျေနပ်တယ်ကွာ.....
Anonymous 24 March 2012 at 09:37
aungko 14 May 2012 at 01:59
ဟုတ်ပါ့ အရိုးအရင်းစုပ်ရတဲ့ ခွေးက ပိုဟောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ
That is jail politic. This tatic used by bcp. Ok?
aungko 14 May 2012 at 01:58
ငဘရေ မင်းကော ထောင်ဘယ်နနှစ်လောက် အကျခံပြီးပြီလဲ နိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေပြောနေရအောင်...
ငါ့တို့တတွေလည်း သူတို့လောက် အနှစ်နာမခံခဲ့ကြဘူး ...
ငဘ အမှားတွေကို လိုက်မပြောနဲ့လေ . . . ပြည်သူတွေအတွက် မင်း ဘာတွေလုပ်နေခဲ့လို့လဲ
Moethe zon is dog. He think he know everything. He cheated people with democracy talk. Rubbig . Never do 1 cent for country and talk big. If he come beack, must kill him
Anonymous 24 May 2012 at 14:49
min ko naing, moe thee zon, koko gyi, and all how they earn money. How they make money. People suffer they happy. Because they can say our publice is suffer and ask money foreigner. As all dog. They make country shameful and want to take money . All begger.Lier.Democracy is not by their hero activity. U Nay Win, Dr,maunmaung earlier planed.U Aung Gyi and U Nu . The KHin Ba Thein Tin made public stike . This was true. All studen were just player. They were crazy and med activity rude to country. No education and just read the book and talk. Destroyer.Today garment factories striked because of payment unfair. And foreigner invest also not earn enough money because sanction. All begger asked to do sanction. This technology 1980 after we brought in mynamar country. We got market. But they destroyed. All young girl sufferd. All fucker they don't know politic. Mad about power. They suport DASSK. But she also the same. People poor she feeled happy.Because he our country way very difficuilt. See history.
EMG CEO Aung Than Htut also the same. Rubbig people. Talk about Dam. Just see the river and write poem can make money?If we got dam can get power, money, sociality development, torrisim, alot. Don't see negative only. HE suport NLD and unfair used media. Do you think other people no brain. I can tell you more than you we got brain. We everyday making money. Not as you. Roung imformaton give people and making money. Way phy also dog. Right or wrong don't know. Next time all your wife sisters becoming Rohiger wives all. I hate them.No love country guys/
Anonymous 24 May 2012 at 22:35
British လူ မျိုး က ဂ ဠုန် စော နဲ့ ပေါင်း ပြီး အာ ဇာ နီ ခေါင်း ဆောင် ကြီး တွေ ကို သက် တယ်။
သူ့ မ အ ဖေ ပါ အ ပါ အ၀င် ပေါ့။ သူ မ က British နဲ့ က လေး မွေး တယ်။ NLD ဆို တာ နိုင် ငံ အ တွက် ဘာ လဲ။ ဗိုလ် ချုပ် ကို တော့ အ မြဲ တမ်း လေး စား ပါ တယ်။ သ မိုင်း က လည်း နိုင် ငံ အ တွက် အ
ရမ်း အရေး ကြီး ပါ တယ်။ British တွေ က တော့ Diana ကို မူ စ လင် သွေး နှော မ ခံ နိုင် ပါ ဘူး။ သတ် ပြစ် လိုက် တာ ပါ။ သူ မ driver က MI -6agent ပါ။ နိုင် ငံ အ တွက် အ သေ ခံ ပြီး တာ ၀န် ကို ထမ်း ဆောင် သွား တာ ပါ။ ပါ ပါ ရာ ဇီ တွေ က တော့ fake ပေါ့။ အရမ်း လေး စား ဖို့
ကောင်း ပါ တယ်။ ကျွန် တော် တို့ မြန် မာ တွေ လဲ လူ လေး စား အောင် နေ သင့် ပါ တယ် ခင် ဗျာ။
Anonymous 14 June 2012 at 08:31
That is right. All myanmar politician weak for patriticim. Because they trusted orther. Presedent Degal had done for country nuclear boom , because not depend on USA. National Interest is 1st every time. BCP, KNDO, KIO, NLD, all fail. They will goon soon.
အောင် ဆန်း စု ကြည် နိုင် ငံ ရေး လုပ် တာ သက် တမ်း အ ရမ်း နု ပါ တယ်။ Communist တွေ မွေး ထုတ် လိုက် တာ ပါ။ တပ် က ဆ ရာ ကြီး တွေ၊ ဗိုလ် ကြီး၊ ဗိုလ်မှူးကြီး တွေ နိုင် ငံ အ တွက် အ သက် နဲ့ ရင်း ပြီး နိုင် ငံ တာ ၀န် ထမ်း ဆောင် နေ တာ ပါ။ အများ စု က ဘာ အ ခွင့် အရေး မှ မ ရ ပါ ဘူး။ နေ ဖို့၊ စား ဖို့ ဘဲ မ ပူ ရ တာ ပါ။ နိုင် ငံ အ တွက် မျိုး ချစ် စိတ် နဲ့ ၀ါ သနာ အ ရင်း ခံ ပြီး လုပ် နေ တာ ပါ။ အောင် ကို နဲ့ စောက် ရူး တွေ မင်း တို့ က ရော နိုင် ငံ အ တွက် ဘာ လုပ် နေ လဲ။ ငါ တို့ အ သက် အ သေ ခံ၊ ခနဓ ကိုယ် တွေ စွန့် လွှတ် ပြီး တိုက် ပေး ထား တဲ့ အ ဖြူ ရောင် နယ် မြေ မှာ အေး အေး ချမ်း ချမ်း နေ ပြီး ပြန် မ ကိုက် နဲ့။ NLDS တွေ သ တ် တိ ရှိ ရင် ငါ တို့ အ ကာ အ ကွယ် အောက် မှာ မ နေ ကြ နဲ့။ ကိုယ့် အိမ် ကို ကိုယ့် နီး ကိုယ့် ဟန် နဲ့ ကာ ကွယ် ကြ။ အ နု ကြမ်း လာ စီး စီး၊ သ ခိုး ၀င် ၀င်။ ကိုယ့် ကိ စ စ ကိုယ် ရှင်း ကြ။ ဘယ့် နှယ် လဲ။ ကြောက် တက် သ လား။ ဘယ် အ ရပ် သား အ စိုး ရ မှ စစ် တပ် ထောက် ခံ မှု့ မ ရှိ နိုင် ငံ ကို အုပ် ချုပ် လို့ မ ရ ဘူး ကွ။ ငြိမ်း ချမ်း ရေး ဆို တာ သေ နတ် နဲ့ လုပ် ရ တာ ကွ။ ဂျုး တွေ ကို နာ ဇီ ဂျာ မ နီ က ဘာ လုပ် သွား လဲ။ သူ တို့ မှာ အား ကိုး လောက် တဲ့ လက် နက် ကိုင် အ ဖွဲ့ အ စီး မ ရှိ လို ကွ။ စစ် အာ ဏာ ရှင် လို့ ပြော ရ အောင် ခု ဒီ မို က ရေ စီ မ ပေး လို့ လား။ မင်း တို့ အ ဖွား ကြီး တောင် လွှတ် တော် ထဲ ရောက် နေ ပြီ။ မင်း တို့ က လက် ရှိ အ စိုး ရ ကို လူ များ များ မုန်း ရင် ပြီး တာ ဘဲ။ နိုင် ငံ ဘာ ဖြစ် ဖြစ် ဆို ပြီး ပြည် သူ ကို စ တေး နေ တာ ကွာ။ နိုင် ငံ ချမ်း သာ ဖို့ NLDS မ လို ပါ ဘူး ကွာ။ ခု လဲ sanction တွေ ပြုတ် နေ ပါ ပြီ။ အ မေ ရိ ကန် က မင်း တို့ ကို လို ချင် တာ မ ဟုတ် ဘူး။ မြန် မာ နိုင် ငံ ကို လို ချင် တာ ကွ။ ငါ တို့ ခေါင်း ဆောင် တွေ americans တွေ နဲ့ ညှိ လို့ ရ တယ်။ မင်း တို့ အ ဖွား ကြီး က အ
နောက် နဲ့ ဘဲ အ ဆင် ပြေ တာ၊ အ ရှေ့ နဲ့ အ ဆင် မ ပြေ ဘူး။ ပြည် ထောင် စု ကြီး ကွဲ သွား မယ်၊ စောက် ရူး ၇ဲ့။ နိုင် ငံ ရေး သ မား တွေ အ မှား လုပ် ပြီး ပြန် ရှင်း ရ တော့၊ ငါ တို့ ဘဲ အသေ ခံ တိုက် ရ တာ ကွ။ နိုင် ငံ ရေး ကို မင်း တို့ ဦး နှောက် နဲ့ ဘာ မှ နား မ လည် ဘဲ နဲ့ ၀ူး ၀ူး ၀ါး ၀ါး လာ မလုပ် နဲ့။ မင်း တို့ NLDS တွေ အ ဖွား ကြီး ရဲ့ တစ် သွေး တစ် သံ တစ် မိန့် အောက် မှာ နေ နေ တာ ကွ။ ဘာ ဒီ မို က ရေ စီ မှ မ ရှိ ဘူး။ င ပေါ တွေ
ရဲ့။ တပ် ကို လက် ညှိုး ထိုး ပြီး အ ပုတ် ချ သေး တယ်။ ငါ တို့ ကို လဲ အ သေ ခဲ့ တိုက် ဖို့ အ မိန့် ပေး အုံး မယ်။ လီး ဘဲ ဟေ့ ကောင်။ ငါ တို့ သေ နတ် ပြောင်း ၀ တွေ က မင်း တို့ အ တွက် ဖြစ် သွား မယ် နော်။ နိုင် ငံ က ဘယ် လို ဘဲ ဖြစ် ဖြစ် တိုး တက် မှာ ပါ။ မင်း တို့ အဖွား ကြီး sanctions တွေ ဖွင့် ဖို့ တစ် ခွန်း ဟ လား။ ပိတ် ဖို့ တောင်း ဆို ခဲ့ တာ လဲ သူ ဘဲ ကွ။ ပြည် သူ ကို စ တေး ထား တာ။ NLDS အာဏာ ရ ဖို့။ ငါ တို့ ခေါင်း ဆောင် တွေ နိုင် ငံ အ ပေါ် စေ တ နာ ထား ပြီး လုပ် လို့
sanction တွေ ပွင့် သွား တာ ကွ။ ပြည် သူ တွေ အိတ် ထဲ ငွေ ထည့် ပေး ရ မယ် ဆို တာ အ ကုန် နား လည် တယ် ကွ။ မင်း တို့ က ပြည် သူ တွေ အိပ် ထဲ ငွေ ရောက် မဲ့ ကိ စ စ ကို မ လို လား ဘူး လား။ နောက် ဆုံး ပြော မယ်။ အ မေ ရိ ကန် တွေ ဘာ လို ချင် လဲ ဆို တာ ငါ တို့ နား လည် တယ်။ တ ရုတ် တွေ ဘာ လို လဲ ဆို တာ လဲ ငါ တို့ နား လည် တယ်။ မင်း တို့ လို စောက် ရူး တွေ မ ဟုတ် ဘူး ဟေ့ ကောင်။ နိုင် ငံ အ တွက် အ ကောင်း ဆုံး လုပ် နေ ကြ တာ။ ငါ တို့ တပ် မ တော် သား တွေ က တော့ မင်း တို့ NLDS ကို ရော၊ အ ဖွား ကြီး ကို ရော မ ထောက် ခံ ဘူး ဟေ့ ကောင်။ မင်း တို့ နိုင် ငံ ကို ပါး စပ် နဲ့ အုပ် ချုပ် မှာ လား။
ဟာ သ ဘဲ။ မင်း တို့ ဒု တ ခ သယ် စ ခန်း မှာ တောင် ကြာ ကြာ မ နေ နိုင် တာ။ ဟေ့ ကောင် ရှင်း ရှင်း ပြော မယ်။ မင်း တို့ NLDS မှာ အ နာ ဂတ် မ ရှိ ဘူး။ အ ဖွား ကြီး အ သက် ၆၇ ရှိ နေ ပြီ။ နောက် ၅ နှစ်၊ ၁၀ နှစ် ဆို နိုင် ငံ ကို ဦး ဆောင် ဖို့ မ ပြော နဲ့
NLDS မ ပြို ကွဲ အောင် ဘဲ အ ရင် လုပ် အုံး။ ရှင်း တယ် နော်။ ဒီ ထက် ရှင်း အောင် ထပ် ပြော မယ်။ Atomic Bomb ကို မြောက် ကို
ရီး ယား က ယူ စ ရာ မလို ဘူး။ အ မေ ရိ ကန် တွေ ဆီ က ယူ လို့ ရ တယ်။ G O O D B Y E, NLDS.
Anonymous 14 June 2012 at 08:26
Anonymous 24 May 2012 at 23:29
တပ် က ဆ ရာ ကြီး တွေ၊ ဗိုလ် မှူး၊ ဗိုလ် မှူး ကြီး တွေ က ဒေါ် အောင် စန်း စု ကြည် ထက် အ သက် ကြီး ပါ တယ်။ နိုင် ငံ အ တွက် လုပ် နေ တာ ဒေါ် အောင် စန်း စု ကြည် ထက် အ များ ကြီး သာ ပါ တယ်။
Anonymous 1 June 2012 at 22:51
၁ နေ့လာ ၁ နေ့ပျက်ဖြစ်သွားပြီ...
၁ နေ့ ၁နေ့ ဘယ်လိုလုပ်င်္ကြရမလဲ...
တစ်ဖက်က အော်နေတယ် ခေါင်း ကွ ခေါင်း တဲ့။ နောက် တစ်ဖက်ကလည်း ပြန်အော်နေတယ် ပန်းကွ မင်းတို့မှားနေပြီတဲ့...။
Anonymous 14 June 2012 at 08:21
Actually U Nay Win not kicked out her. But U Nu and Daw Khin Kyi using tactic for their power . U Thant too. But all problem came from british . They made trouble to burma.1st they got rid General Aung San. 2.KNDO comflict afeter freedom burma.3.BCP pushed to underground. 4.Pinlone agreement and diverdent law.5.U Nu weak management and leading role.6.All the time army is one grouth to save country.7.U Nay Win took power and try to alive burme with U Nu group and BCP. But all failed. You must know about history and Advsory group 33 .All is uselss . Because of leadership. But DASSK less knowledge about history and internal affair.This her problem.She can be famouse. But country problem can not solve.
ဒေါ်စု က လွဲရင် ဒီမိုခွေးတွေအားလုံး လီးပဲကွာ
ဒေါ်စုက NLD လား? NLD က ဒေါ်စုလား? လို့ မေးချင်ပါတယ်...